Fihetsiketsehana Nataon’ireo Polisy tao Hong Kong sy Ireo Mpomba an’i Beijing Hanoherany ny Fanamelohan’ny Fitsaràna ireo Manamboninahitra Nanao Herisetra Taminà Mpikatroka Mafàna Fo · Global Voices teny Malagasy
Fihetsiketsehana Nataon'ireo Polisy tao Hong Kong sy Ireo Mpomba an'i Beijing Hanoherany ny Fanamelohan'ny Fitsaràna ireo Manamboninahitra Nanao Herisetra Taminà Mpikatroka Mafàna Fo
Voadika ny 10 Marsa 2017 1:23 GMT
Vondrona mpomba an'i Beijing nifamory hanohitra ilay didin'ny fitsaràna. Sary an'i Ellie Ng tao amin'ny Hong Kong Free Press.
Manamboninahitra fito avy amin'ny polisin'i Hong Kong no voaheloka tamin'ny 14 Febroary noho ny fanaovany herisetra taminà mpikatroka mafana fo iray mpandàla ny demaokrasia tamin'ny 2014, nandritra ireo hetsipanoherana Bodoy ny Afovoany nangatahana ny hanendren'ny olompirenena izay ho mpitondra ambony ao an-tanàna.
Nasiana rojo vy i Tsang Ken ary nentin'ireo manamboninahitra ho any amin'ny takontakona, toerana nilakoana sy nandakandakàn'ireo manamboninahitra azy. Na voarakitra tanaty lahatsary aza ilay herisetra ary nalefa tamin'ny vaovaon'ny fahitalavitra, ary voaporofon'ny antontan-taratasy medikaly fa nahazo ratra maro i Tsang, ny Jona 2015 ilay raharaha vao nentina teny anatrehan'ny fitsaràna, efa ho taona roa taorian'ilay tranga.
Namoahan'ny fitsarana sazy roa taona an-tranomaizina ireo polisy. Tao amin'ny Facebook, marobe no nitehaka tamin'ilay vokatra, ny sasany nihanihany ho io no fanomezana tsara indrindra tamin'ny Andron'ny Mpifankatia.
Nambaran'ny mpitsara David Dufton rehefa namoaka ny didy hoe nilain'ny fitsarana ny “manome ohatra” avy amin'ilay tranga mba hiantohana hoe tsy hisy intsony manamboninahitra hanandrana handika lalàna amin'ny hoavy:
Ny toriana dia nanimba ny lazan'i Hong Kong manoloana ny fiarahamonina iraisampirenena… Tsy misy mihitsy azo anamarinana ny fitondrana an'i Tsang ho any amin'ilay zanatoby mba hodarohana.
Nisy vondrona polisy nandà ilay fanamelohana sy ny fampidirana am-ponja, ary ny Kaomiseran'ny polisy, Steven Lo Wai-chung, nanome alàlana hanaovana fanangonana vola ho an'ireo manamboninahitra fito voaheloka.
Ny Sabotsy 18 Feb, tezitra ireo vondrona mpomba an'i Beijing ary nifamory hanohitra ilay didy navoaka. Nandritra ilay famoriana, nangatahan'ireo mpanao hetsipanoherana ny Lehiben'ny Mpanatanteraka eo amin'ny tanàna, CY Leung, hanome famelankeloka ho azy fito ireo. Nokianin'izy ireo ny fitsaràna ho nalemy nanoloana ireo mpanao hetsipanoherana Bodoy ny Afovoany, ary henjana tamin'ireo manamboninahitry ny polisy ‘izay tsy nanao afatsy ny nanatanteraka ny andraikiny fotsiny’.
Ny hetsipanoherana ‘Bodoy ny Afovoany’ dia hetsika nitranga tao afovoan-tanànan'i Hong Kong nandritry ny telo volana tamin'ny faramparan'ny 2014. Notakian'ireo mpandray anjara ny hamelàn'i Beijing ny vahoaka ao Hong Kong, fari-piadidiana iray manokana ao amin'ny tanibe, hifidy izay ho mpirotsaka atolotr'izy ireo ho lehiben'ny mpanatanteraka, fa tsy hoe homena alàlana fotsiny hifidy ireo mpirotsaka efa voafantina mialoha. Tamin'ny fampiasàna ny elo, nijoro niaritra sy nanohitra ny ezaka feno herisetran'ny polisy hanadiovana ny toby nisy azy ireo tamin'ny fampisàna entona mandatsa-dranomaso sy tsifotra dipoavatra ny mpanao hetsipanoherana, nahatonga ny sasany hanome anarana ilay hetsika hoe “revolisionan'ny elo”
Maromaro tamin'ìreo olomalaza mpomba an'i Beijing koa no niteny tao amin'ny Facebook ho fanoherany ny fanamelohana sy fanasaziana ireo manamboninahitry ny polisy. Ilay tale mpanatontosa sarimihetsika, Clinton Ko, nanoratra (ary nofafàny avy eo) hoe:
Naka ny ankolafin'ireo izay nitondra faharavàna tao Hong Kong ilay mpitsara avy amin'ny tapa-damba mavo [mpomba ny demaokrasia]. Ho an'ireo mpikorontana mpomba ny fahaleovantena, izay mandoro, midaroka polisy ary mandrava fananam-bahoaka, sazy maivana no nomen'ilay alikam-pitsara, ny sasany afaka madiodio. Tena fitanilàna tanteraka.
Mpisolovava iray mpomba an'i Beijing, Junius Ho, naneho hevitra tamin'ny alàlan'ny lahatsary iray tao amin'ny Facebook :
Tsy natondron'izy ireo tany amin'ireo mpanao hetsipanoherana ny basiny. In-droa monja ry zareo no namely an'i Tsang tery amin'ny sisiny tery mba hanalàny ny hatezerany [… ] Famaizana kely natao hampitandremana ny sasany tsy hanao hadisoana goavana amin'ny hoavy.
Niteraka fanehoankevitra avy any amin'ny tanibe Shina ihany koa ilay raharaha. Ilay gazety Global Times mpanala azy miaradia amin'ny fanjakàna, dia namoaka fanehoankevitra iray nanakiana ilay mpitsara, David Dufton, noho ilay didy ary niampanga ny ‘rafi-pitsaran'ny mpanjanaka’ ho ‘nanitsakitsaka ny fanahin'ny lalàna’ (Hong Kong dia zanatany Britanika nandritry ny 156 taona hatramin'ny 1997):
Feno dindon'ny fanjanahana [ny faritry ny fitsaràna] sy mbola mametraka tsy fivadihana amin'i lalàm-panorenan'i Shina ary ny Lalàna Fotora [ao Hong Kong]. Araka izany rehefa miresaka olana politika, mivaona ny fitsaràny ary manitsakitsaka ny fanahin'ny lalàna. […] Mifanohitra amin'ny tombontsoan'i Hong Kong io ary hanimba ny rafi-pitsaran'i Hong Kong.
Ilay olomalazan'ny media sosialy, Cai Xiaoxin, avy any amin'ny tanibe Shina, dia nanambara ampahibemaso hoe handoa 10.000 yuan, na manodidina ny 1.400 dolara amerikàna eo izy, ho an'izay olona sahy hidaroka an'ilay mpitsara, David Dufton.
Ary i Tiffany Chen, vadin'i Charles Heung izay mifamatotra amin'ny Sun Yee On Triad, iray amin'ireo fikambanan-jiolahy goavana sy matanjaka indrindra ao Hong Kong, ny fianakaviany, dia niteny ihany koa tao amin'ny Weibo nanohitra ny fanapahankevitr'ilay mpitsara.
‘Ny tena mampahatahotra dia ny fiarovan'ny politika ny hadalàna ataon'ny polisy’
Hitan'i Chung Kim-Wah, profesora mpampianatra ny siansa sosialy ampiharina, fa mahatsikaiky ny toedraharaha ary notsipihany fa nanimba ny lazan'ny mpitandro filaminana ny zavatra nataon'ireo polisy. Niantso ny lehiben'ny polisy izy mba hiala tsiny amin'ny vahoaka noho ny fitondrantena tsy mendrika nataon'ireo manamboninahitra :
Ankehitriny dia ny vadin'ny mpitarika ny Triad no miteny misolo vaika ny polisin'i Hong Kong. Mba nisy olona niezaka nisaintsaina ny firodanan'ny endrika ahitana ny polisy va re? Sa tokony hampirehareha azy ireo izany? Mba mahalala menatra kely ihany ve ny mpitarika teo aloha sy ankehitriny ao amin'ny polisy? […] Nisy fotoana ny polisy noheverina ho ny departemanta mendri-pitokisana indrindra amin'ny fampiharana ny lalàna, saingy tsy ela akory izao, nikororosy hirefarefa amin'ny tany izany. […] Mba alaivo sary an-tsaina, amin'ny maha-hery fototra mpampihatra ny lalàna azy, ny ampahefatry ny vahoaka no tsy manam-pitokisana azy ireo. Dia amin'ny fomba ahoana no hanatanterahan-dry zareo ny asany?
Tokony misaina lalina ny manamboninahitra tsirairay mba hanavotana ny lazan'izy ireo sy hamerenana indray ny fifandraisany amin'ny olompirenena. Io no fanalahidin'ny fandraisana andraikitry ny lehiben'ny polisy. Saingy amin'izao fotoana izao, milevim-belona ry zareo.
Raha ny marina, teny anaty famoahana vaovao amin'ny aterineto sy ny media sosialy dia niteraka fanakianana totoafo manohitra ny polisy ny hasosorana sy ireo hetsipanoherana tamin'ny faran'ny herinandro . Araka ny nanaporofoan'i Lam Yin Bong, mpiasan'ny media azy, tao amin'ny Stand News:
Tsy ny fitondrantenan'ny polisy no mampahatahotra satria tranga maningana ireny. Ny tena mampahatahotra dia ny fiarovan'ny politika ny hadalàna ataon'ny polisy. Araka izany, ireo mpomba ny “establishment” (ny rafitra napetraka) sy ny departemanta mpampihatra ny lalàna dia afaka manilika anjorony ny fanapahankevitry ny fitsaràna sy ny fahamendrehan'ireo mpampihatra ny lalàna.
Noho ny fahatahorana hoe ho simban'ireo vondrona mpomba an'i Beijing ny tany tàn-dalàna ao Hong Kong, namoaka fanambaràna iray ny fikambanan'ireo mpisolovava ho fangatahana amin'ny sekreteran'ny fitsaràna mba handray andraikitra hiantohana ny fahafahan'ny rafi-pitsaràna hanao an-kalalahana ny asany maha-mpitsara azy tsy hizaka ny fanivaivàna mamely avy atsy sy aroa.